Ichibi elihle lihlehla imizuzu emi-2 ukusuka eMarina! - I-Airbnb
Ichibi elihle lihlehla imizuzu emi-2 ukusuka eMarina!
Indlu enhle yechibi endaweni yaseLochwood! Inamakamelo okulala ama-3 amahle, i-suite esezingeni elikhulu elinombhede olingana nenkosi kanye negumbi lokugezela, amagumbi okulala ama-2 endaweni engaphansi ngalinye linombhede wendlovukazi, igumbi lokuhlala elikhulu elingaphansi elinamasofa amabili ahoxiswayo, kanye namabhantshi angamawele. Indlu yekilabhu ingemuva kwendlu futhi ifaka isikhungo sokuqina, itafula le-pool, i-Foosball, i-pool, nobhavu oshisayo. (Ichibi kanye nobhavu oshisayo kuvula usuku lweSikhumbuzo-usuku lomsebenzi). I-Bear lake ne-marina zingaphesheya komgwaqo! Imibhede yabangu-12 ppl, yokupaka izimoto ezi-4-5
Indlu yethu yechibi itholakala enhliziyweni yeBear Lake life! Ikhaya lihlotshiswe kahle futhi lahlelwa ukuze kuhlaliswe kahle futhi kulale abantu abadala abangu-12 ngokunethezeka nombhede wenkosi, imibhede emibili yezindlovukazi, izindawo zokudonsa izindlovukazi ezimbili, imibhede emikhulu, kanye nephakethe kanye ne-crib yokudlala, wonke umuntu uzolala ngokunethezeka!
Ekhishini, uzothola wonke amabhodwe namapani adingekayo ukuze upheke ukudla okuphekwe ekhaya. Ngomenzi wekhofi, izitsha, nezitsha zokuxuba, uzoba nazo zonke izinto ezibalulekile!
Izindlu zokugezela zigcwele okomisa okomisa, amathawula, ishampoo, i-conditioner, nokugeza umzimba ukuze kulethe ukunethezeka kwekhaya eholidini lakho. Ayikho into efana neshawa emnandi ngemva kosuku olude lokuhamba ngesikebhe *sigh*.
Ikamelo ngalinye line-TV yalo yesikrini esiyisicaba esihlakaniphile lapho ungangena khona kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-TV oluthandayo, amashidi athambile, nomatilasi abanethezekile ukuze uqinisekise ukuthi uthola ukuphumula okudingayo ngemva kwazo zonke izinsuku ezigcwele ubumnandi be-Bear Lake oyoba nazo.
Ezinye izintandokazi zasehlobo zifaka ama-BBQ, ukuphumula ngaphandle nechibi kanye nobhavu oshisayo, kanye ne-marina ehamba ibangana nje. Izintandokazi zasebusika ziyahamba zihamba eqhweni kanye ne-sledding emagqumeni aseduze agcwele iqhwa, zidlula endaweni eyodwa enhle ukuze uthole isidlo sakusihlwa, bese ziqeda usuku ekhaya ngoshokoledi oshisayo futhi zidlala eminye yemidlalo yebhodi ejabulisayo. Kungakhathaliseki ukuthi ihlobo noma ubusika, izinketho zakho azipheli!
Uma unemibuzo ngesikhathi sokuhlala kwakho, sicela uthinte futhi ngizotholakala ukuze ngikusize!